Warbixin ka hadlaysa tirada dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee la dilay sanadkaan oo kaliya. Yaa fuliyay howlgallada? | Hadalsame Media
Home Wararka Warbixin ka hadlaysa tirada dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee la dilay sanadkaan oo...
Warbixin ka hadlaysa tirada dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee la dilay sanadkaan oo kaliya. Yaa fuliyay howlgallada?
(Chad) 13 Maarso 2019 – Saraakiil ka tirsan kuwa Maraykanka ayaa sheegay in howlgalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Daarusalaam ee gobolka Shabeellada Hoose kaasoo sida la sheegay ay hoggaaminayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya lagu dilay 8 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegay inay iska difaaceen weerarkaasi oo isugu jiray cir iyo dhul islamarkaana ay dileen hal askari oo Maraykan ah, laakin waxaa arrintaasi beeniyay Maraykanka oo sheegay in ciidamadooda oo doorkoodu ahaa la talin ay dhamaantood caafimaad qabaan.
Maraykanka waxaa Soomaaliya ka jooga qiyaastii Shan boqol oo Askari, doorkooduna waxaa uu yahay tala siinta ciidamada gaarka ah ee dowladda Soomaaliya kuwaas oo inta badan howlgallo habeen dheelmad ah ka fuliya deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab.
Warbixin la helay ayaa sheegaysa in ururka Al-Shabaab ay haystaan in ka badan Afar kun oo dagaalame.
Hase ahaatee waxaa labadii sanno ee ugu dambeeyay sii xoogeysanayay duqeymaha diyaaradaha Maraykanka ay la beegsanayaan saldhiga iyo xarumaha kooxda Al-Shabaab ee bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya.
Maraykanka ayaa sheegay in Ciidamada Soomaaliya oo kaashanayay kuwa Maraykanka ay sanadkaan oo kaliya dileen labo boqol iyo afarta iyo afar ( 244) dagaalame oo ka tirsanaa Al- Shabaab.
Tan iyo intii uu qabtay Donald Trump hoggaanka dalka Maraykanka waxaa uu fasax u siiyay ciidamadiisa ka joogaa Soomaaliya iyo Geeska Afrika inay qaadi karaan duulaan islamarkaana aysan ku koobnaan oo kaliya is difaacid.
Previous articleJABKII SHIISHADDA: Waa sheeko DHAB ah oo dhug u baahan!
Next articleRW Kheyre oo qaabilay qaar ka mid ah dhalinyarada Magaalada Kismaayo + Sawirro